पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने ? – korea pati
July 23, 2020 Korea patiLeaveaComment on पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने ?
खाना खाएपछि चकटी ओछ्याएर बसौं । दुवै घुँडालाई मोड्ने र हत्केलाको बलले बस्नुपर्छ । दुवै खुट्टाका औंलाहरु आपसमा मिलेको हुनुपर्छ र कुरकुच्चामा अलिकति दूरी हुनुपर्छ । शरीरको पूरै भार खुट्टामा सार्ने । बज्रासन गर्ने क्रममा कम्मरलाई एकदम सिधा राख्नुपर्छ । यही अवस्थामा दस मिनेट बस्ने र लामो–लामो सास लिनुपर्छ । बज्रासनको दौरान शरीरको मध्यभागमा सबैभन्दा बेसी दवाव पर्छ । यसबाट पेट तथा आन्द्रामा हल्का दबाब पर्छ जसले गर्दा कब्जियतको समस्या हट्छ ।
कोरिया पठाइदिने भन्दै एजेण्टले पुर्‍याए कम्बोडिया, कोरोना महामारीमा विचल्ली
लकडाउनमा फिट केकी